चीन ट्रक टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डर कारखाना र निर्माता Xinrun
१. टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरलाई बहु-चरण हाइड्रोलिक सिलिन्डर पनि भनिन्छ। यो दुई वा बहु-चरण पिस्टन सिलिन्डरबाट बनेको छ, मुख्यतया सिलिन्डर हेड, सिलिन्डर ब्यारेल, आस्तीन, पिस्टन र अन्य भागहरूको मिलेर बनेको छ। त्यहाँ सिलिन्डर ब्यारेलको दुबै छेउमा इनलेट र आउटलेट पोर्टहरू ए र बी छन्। जब तेल पोर्ट ए मा प्रवेश गर्दछ र तेल पोर्ट बी बाट फिर्ता हुन्छ, पहिलो चरणको पिस्टन ठूलो प्रभावकारी क्षेत्रको साथ धकेल्छ, र त्यसपछि सानो दोस्रो चरणको पिस्टन सारिन्छ। किनभने पोर्ट एमा प्रवाह दर स्थिर छ, ठूलो प्रभावशाली क्षेत्र भएको पिस्टनसँग कम वेग र उच्च जोर छ, अन्यथा, उच्च वेग र कम थ्रस्ट। यदि पोर्ट बी मा तेल छ र पोर्टaमा तेल फिर्ता छ भने, माध्यमिक पिस्टन पहिले अन्तिम बिन्दुमा फर्कनेछ, र त्यसपछि पहिलो पिस्टन फर्कनेछ।
२. टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरका विशेषताहरू हुन्: काम गर्ने स्ट्रोक धेरै लामो हुन सक्छ, र काम नगरेको बेला यसलाई छोट्याउन सकिन्छ। यो अवसरहरूको लागि उपयुक्त छ जहाँ स्थापना ठाउँ सीमित छ र यात्रा आवश्यकता धेरै लामो छ, जस्तै टिपर ट्रक र क्रेनको टेलिस्कोपिक बूम। जब टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डर एक पछि अर्को चरण विस्तार गर्दछ, प्रभावी कार्य क्षेत्र बिस्तारै घट्छ। जब इनपुट प्रवाह दर स्थिर छ, विस्तार गति बिस्तार बिस्तार बढ्छ; जब बाह्य लोड स्थिर हुन्छ, हाइड्रोलिक सिलिन्डरको कार्य दबाव बिस्तारै बढ्दछ। एकल अभिनय टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सिलिन्डरको विस्तार तेलको चापमा निर्भर गर्दछ, र संकुचन आत्म वजन वा लोडमा निर्भर गर्दछ। तसर्थ, यो झुकाउने वा सिलिन्डर ब्लकको ठाडो घुमाउने अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ।
A.ए. सिलिन्डर र सिलिन्डर बीचको जडान
त्यहाँ सिलिन्डर र सिलिन्डर बीच धेरै प्रकारका जडानहरू छन्, जस्तै पुल रड जडान, फ्ल्यांज कनेक्शन, भित्री आधा घण्टा कनेक्शन, वेल्डिंग जडान। यहाँ वेल्डिंग जडान चयन गरिएको छ। एक प्रकारको
b पिस्टन र पिस्टन रड बीचको जडान
पिस्टन र पिस्टन रड बीचको सम्बन्ध प्रायः थ्रेड कनेक्शन संरचना र क्ल्याम्पि key कुञ्जी कनेक्शन संरचना अपनाउँछ। थ्रेड जडानको संरचना सरल र व्यावहारिक छ, र यसलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गरिन्छ; क्ल्याम्पि key कुञ्जी संयन्त्र ठूलो सिँचाइको लागि उपयुक्त छ ठुल्दो कामको दबाव र कामका मेशीनरीहरूको ठूलो कम्पनको साथ। त्यसकारण, थ्रेड गरिएको कनेक्शन संरचना विभिन्न कारकहरूबाट चयन गरिएको छ।
c हाइड्रोलिक सिलिन्डर ब्लकको सुरक्षा कारक
सिलिन्डर ब्लकका लागि, हाइड्रोलिक दबाव, मेकानिकल फोर्स र सुरक्षा कारक सबैको सिलिन्डर ब्लकमा प्रभाव छ। उच्च चाप र सामान्य कार्य क्षमताको क्षतिको कारण हाइड्रोलिक सिलिन्डरको विफलता अक्सर तीन प्रकारमा प्रकट हुन्छ: शक्ति समस्या, कठोरता समस्या र गुणात्मक समस्या, र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक शक्ति समस्या हो। सिलिन्डर ब्लकको शक्ति सुनिश्चित गर्न, हामीले उपयुक्त सुरक्षा कारक विचार गर्नु पर्छ
अघिल्लो: लोडर हाइड्रोलिक सिलिन्डर
अर्को: कार ज्याक
निर्माण मशीनरी हाइड्रोलिक सिलिन्डर
ट्रक हाइड्रोलिक सिलिन्डर
वातावरणीय सरसफाई उपकरण हाइड्रोलिक सिलिन्डर
उत्पाद विवरण १. यो मुख्यतया ठूला र मध्यम आकारको उत्खननकर्ताहरूका लागि हामी एड हो। यो 350 pressure० किलोमिटर / सेमी ^ २ को अधिकतम दबाव र २० डिग्री ℃ - १०० ℃ (चिसो क्षेत्रको विनिर्देशन - ℃० ℃ - ℃ ० ℃) को सर्तहरूको लागि उपयुक्त छ। मुख्य सुविधाहरू २.a. सानो आकार, हल्का तौल र उच्च शक्ति: सिलिन्डर बडी र पिस्टन रडको सामग्री चयन, प्रोसेसिंग टेक्नोलोजी र वेल्डिंग टेक्नोलोजी शक्ति, थकान डिजाइन र विज्ञापनका आधारमा अपनाईन्छ ...